Tether ego taa
Tether calculator online, onye ntụgharị Tether. Tether ego taa na ahia ahia ego di iche iche.
Tether ego na Nigerian naira (NGN)
1 Tether (USDT) nhata 388.02 Nigerian naira (NGN)
1 Nigerian naira (NGN) nhata 0.002577 Tether (USDT)
Ntụgharị Tether na Nigerian naira. Taa Tether ọnụego Ka Nigerian naira na 06/06/2020.
Tether ego na dollars (USD)
1 Tether (USDT) nhata 1 dollars (USD)
1 dollar (USD) nhata 1 Tether (USDT)
Ntụgharị Tether na dollar. Taa Tether gbadaa dollar na 06/06/2020.
Ọnụahịa maka Tether maka taa 06/06/2020 - nkezi ọnụego usoro Tether . Ọnụ ego nke Tether esiteghị n'aka ụlọ akụ, dịkwa ka ọ dị na ego oge gboo. Nchịkọta mgbakọ na mwepụ banyere ọnụahịa ngwa ngwa na azụmaahịa na-enye gị ohere gbakọọ ọnụego Tether maka taa 06/06/2020. Ileba anya na uzo Tether mgbanwe mgbanwe n'ịntanetị nwere ike inye aka ịkọ ọnụego Tether echi.
Tether ngwaahịa taa
Tether na mgbanwe taa - usoro azụmaahịa niile Tether> site na mgbanwe niile achịkọtara na tebụl. Tebụl nke Tether na-agbanweta taa nwere ọnụego mgbanwe kachasị mma, ịzụrụ ihe, ahịa nke Tether, ozi banyere ụzọ abụọ a si azụ ahịa ego ego na mgbanwe nke ya. a na-eme mkpọsa ahụ. Họrọ mgbanwe kacha mma ma ọ bụ kacha mma Tether, na-enyocha ọnụego ya na tebụl nchịkọta nke mgbanwe mgbanwe. Na ndepụta nke ụzọ abụọ anyị si eweta na tebụl azụmaahịa site na mgbanwe, ị ga - ahụ azụmahịa ozugbo Tether - Nigerian naira nke na-egosi ezigbo ọnụahịa azụmahịa Nigerian naira - Tether.
Ego kachasị mma maka ireahịa Tether nke ị nwere ike ịchọta na ebe a.
Ọnụahịa kacha mma maka ịzụ Tether nke ị nwere ike ịchọta na ebe a.
USDT/TRY $ 1.01 $ 0.991433 Best Tether gbanwere New Turkish lira
USDT/RUB $ 1.05 $ 0.968463 Best Tether gbanwere Russian ruble
USDT/ETH $ 1.12 $ 1.00 Best Tether gbanwere Ethereum
USDT/BRL $ 1.01 $ 1.01 Best Tether gbanwere Brazil n'ezie
USDT/UAH $ 1.00 $ 0.978542 Best Tether gbanwere hryvnia
USDT/KZT $ 1.03 $ 1.01 Best Tether gbanwere Kazakhstani tenge
USDT/USD $ 1.05 $ 0.997000 Best Tether gbanwere US dollar
USDT/IDR $ 1.02 $ 0.994519 Best Tether gbanwere Indonesian rupiah
USDT/EUR $ 1.00 $ 1.00 Best Tether gbanwere Euro
USDT/USDC $ 1.00 $ 0.996973 Best Tether gbanwere USD//Coin
USDT/INR $ 1.02 $ 1.01 Best Tether gbanwere Indian rupee
USDT/USDK $ 1.00 $ 1.00 Best Tether gbanwere USDK
USDT/DAI $ 1.00 $ 0.993543 Best Tether gbanwere Dai
USDT/HUSD $ 1.00 $ 1.00 Best Tether gbanwere HUSD
USDT/BTC $ 1.19 $ 1.05 Best Tether gbanwere Bitcoin
USDT/XRP $ 0.997290 $ 0.997290 Best Tether gbanwere XRP
USDT/EOS $ 1.02 $ 1.02 Best Tether gbanwere EOS
USDT/QC $ 1.00 $ 1.00 Best Tether gbanwere QCash
USDT/PAX $ 1.00 $ 1.00 Best Tether gbanwere Paxos Standard Token
USDT/TUSD $ 1.00 $ 1.00 Best Tether gbanwere True USD
USDT/AUD $ 1.01 $ 1.00 Best Tether gbanwere Aussie dollar
USDT/ZAR $ 1.07 $ 1.07 Best Tether gbanwere Rand
USDT/KRW $ 1.00 $ 0.990357 Best Tether gbanwere South Korean merie
USDT/GBP $ 1.01 $ 1.00 Best Tether gbanwere pound magburu onwe
USDT/THB $ 1.00 $ 0.991462 Best Tether gbanwere Thai baht
USDT/CAD $ 1.02 $ 0.990933 Best Tether gbanwere Canadian dollar
USDT/CHF $ 1.02 $ 1.02 Best Tether gbanwere Swiss franc
USDT/JPY $ 0.986112 $ 0.986112 Best Tether gbanwere Yen
USDT/KT $ 0.999368 $ 0.999368 Best Tether gbanwere Kuai Token
USDT/VNDC $ 1.03 $ 1.00 Best Tether gbanwere VNDC
USDT/TWD $ 1.00 $ 1.00 Best Tether gbanwere Taiwan ọhụrụ dollar
USDT/VND $ 0.997764 $ 0.997764 Best Tether gbanwere Vietnamesse Dong
USDT/USDN $ 1.00 $ 1.00 Best Tether gbanwere Neutrino Dollar
USDT/PFC $ 1.00 $ 1.00 Best Tether gbanwere PFC
USDT/IDRT $ 1.19 $ 1.19 Best Tether gbanwere Rupiah Token
USDT/BUSD $ 1.01 $ 1.01 Best Tether gbanwere Binance USD
USDT/PERP $ 0.999600 $ 0.999600 Best Tether gbanwere PERP
Ofgwọ nke Tether na dollar bụ njirimara mgbanwe gbanwere ọnụego Tether. Na mgbanwe ego ego, onodu buru ibu na ahia nke Tether na-apụta na dollar. Costgwọ nke Tether dị iche na ọnụahịa nke Tether dịgasị iche na mgbanwe. Akwụ ụgwọ Tether maka taa algorithm anyị na-atụle ịnakọta ozi gbasara azụmahịa niile nke cryptocouples nwere nnukwu azụmaahịa na ịre ahịa crypto.
Ihe Tether ka Nigerian naira nkezi ọnụ ahịa algorithm dị mfe. Ọ họrọ ụdị mgbanwe mgbanwe maka otu ụzọ azụmaahịa maka taa. Ọzọ, ọ na-agbakọ ọnụego mgbanwe nke ego ego chọrọ chọrọ megide dollar. Ma emesịa ọ na-anọgide na-eme ka ọnụego a gbanwee gaa na Nigerian naira. Ntụle onwe kwụsịrị iche maka uru nke Tether na Nigerian naira nwekwara ike ime na azụmahịa ndị dị na tebụl mgbanwe mgbanwe crypto. na ibe a. A na-enweta ego nke Tether na dollar US ọ bụghị naanị site na ọnụego ugbu a ma ọ bụ ọnụahịa nke Tether. Ọnụ ego nke ego ego na otu azụmahịa nwekwara ike imetụta ọnụego ahụ. Dị ka ọ na-adị, ọnụahịa nke Tether dị iche na nkezi ọnụahịa na mgbanwe, mgbe azụmahịa dị iche na nkezi.
Tether mgbako n'ịntanetị - usoro ngwanrọ ngwanrọ nke cryptoratesxe.com maka ịnyefe ego ole Tether iji tinye ego na ego ozo ugbu a Tether ọnụego mgbanwe ma ọ bụ na ego ego ọzọ. You nwere ike iji otu akụkụ saịtị ahụ, nke akọwapụtara maka nke a: onye na-eme ego ego. Otu na ọrụ ntụgharị kachasị ewu ewu bụ Tether ka Nigerian naira ịgbakọ ntanetị, nke gosipụtara ego nke Nigerian naira achọrọ ịzụta ma ọ bụ ree otu ego nke Tether. Na ya, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịgụta ego ọ dị mkpa iji Nigerian naira iji tọghata ego nke Tether.